Yiziphi izinkampani ezinkulu zemithi eNdiya? | Ukuhamba kwe-Absolut
Yiziphi izinkampani ezinkulu zemithi eNdiya?
Imboni yezemithi yaseNdiya ingenye yezimboni ezinkulu emhlabeni. I- Izinkampani ezihamba phambili ezenza imithi eNdiya ngokuhlanganyela, zingabaphakeli abakhulu kunabo bonke bemithi ejwayelekile. Ngaphezu kwalokho, banikezela ngaphezu kwe-60% yesidingo somhlaba semithi yokugoma.
Akukona lokho kuphela: eNdiya kunezitshalo ezicishe zibe ngu-1.400 ezithaka imithi ezivunyelwe yi WHO. Akhiqiza cishe ama-60.000 brand generic avela ezigabeni ezingama-60 ezahlukahlukene zokwelapha. Njengoba kunezinkampani zemithi ezingaphezu kuka-3.000 ezisebenzayo nenethiwekhi enamandla yamalabhorethri angaphezu kuka-10.500 XNUMX, kuphephile ukusho lokho I-India iyikhemisi elikhulu emhlabeni.
Imboni eyenza imithi ye India lalinganiselwa ku-2019 kuma-US $ 36.000 billion. Imithi ejwayelekile, enesabelo semakethe esingu-71%, yakha ingxenye enkulu kakhulu yomkhiqizo wayo.
Nalu uhlu lwezinkampani ezihola phambili zemithi eNdiya. I-Top 10 yethu ephezulu:
1 ICadila Healthcare
2 Isifufula Pharma
4 UDkt Reddys Labs
5 ILupine Ltd.
6 U-Aurobindo Pharma
Iyinkampani eyenza imithi enkulu kunazo zonke eNdiya. Yasungulwa ngo-1952 ngu URamanbhai Patel futhi izinze e-Ahmedabad. futhi ibe yinkampani enkulu kunazo zonke eyenza imithi eNdiya.
ICadila Healthcare inezitshalo eziyishumi zokukhiqiza ezweni lonke ezindaweni ezahlukahlukene ezweni: iNavi Mumbai, Ankleshwar, Changodar, Goa, Vatva, Baddi, Dabhasa, Vadodara, Dabhasa nasePatalganga.
Futhi inekomkhulu layo e-Ahmedabad futhi ikhiqiza izitshalo ezingxenyeni ezahlukene zezwe. I-Pharma Torrent inolwazi olukhethekile ekwenzeni imithi yokwelashwa kohlelo oluphakathi lwezinzwa (CNS), ukuphazamiseka kwamathumbu, ama-analgesics nama-antibiotics.
Ngokukhula okumangazayo emashumini eminyaka amuva nje, i-CIPLA, esungulwe eMumbai ngo-1935, isibe enye yezinkampani ezenza inzuzo kakhulu eNdiya.
Ifemu iyathuthuka imithi yokwelapha izifo ezahlukahlukene ezinjengokudangala, isifo sikashukela, noma izifo zokuphefumula. Inani eliphelele lokuthengisa lingamarandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7.000 ngonyaka (cishe ama-euro ayizigidi ezingama-78). Inezikhungo eziyisikhombisa zokukhiqiza lapho kusebenza khona abasebenzi abangaphezu kuka-22.000.
UDkt Reddys Labs
Akungabazeki ukuthi enye yezinkampani ezinkulu zemithi eNdiya, ezinokubonakala komhlaba jikelele. Le nkampani yasungulwa ngo-1984 yi UDkt Anji Reddy. Ikomkhulu layo liseHyderabad futhi likhiqiza izidakamizwa ezingaphezu kwezingu-180 kanye nezithako ezingaphezu kuka-50 ezisebenzayo zemithi.
Kukhona izitshalo eziyisikhombisa ezikhiqiza uDkt Reddys Labs eNdiya. Ngaphandle kwezwe, le femu inamalabhorethri eRussia futhi isabalalisa imithi yenkampani eyenza imithi yaseBelgium i-UCB SA eseNingizimu Asia.
Isibalo sayo sokuthengisa singaphezu kwama-rupees ayizigidi ezingama-5.000 1968 ngonyaka. ULupine wazalwa ngo-XNUMX ngenxa yesinyathelo sika UDesh Bandhu Gupta, ongomunye wabacwaningi abahlonishwa kakhulu ezweni. Le nkampani njengamanje ithengisela imikhiqizo yayo emazweni angaphezu kwama-70 emhlabeni jikelele, okubalwa iNingizimu Afrika, iJapan, i-Australia kanye ne-European Union.
Izinkampani Eziphezulu Zemithi eNdiya
Kusungulwe ku-1988, I-Aurobindo Pharma Limited iphathelene nokwenziwa kanye nokukhiqizwa kwemithi ejwayelekile kanye nezithako ezisebenzayo. Unolwazi olukhethekile ezindaweni eziyisithupha zokwelashwa: i-Central Nervous System, i-cardiovascular, antibiotic, antiretroviral, antiallergic kanye ne-gastroenterological products.
Le nkampani ithumela imikhiqizo yayo emazweni angaphezu kwe-120 futhi inenzuzo engaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezine zamarandi ngonyaka.
Enye yezinkampani ezinkulu zemithi e-Idnia, esungulwe ngu UDilip Shanghvi ngo-1983 endaweni yaseVapi eGujarat. Ekuqaleni iSun Pharma yayizinikele ekukhiqizeni izinhlobo ezinhlanu zezidakamizwa eziqondiswe ekwelapheni izifo zengqondo. Kamuva, inkampani yathola okwenziwayo I-Ranbaxy, ukwandisa inhlokodolobha yayo nokwandisa umkhiqizo wayo.
Ama-70% emithi ye-Sun Pharmaceutical athengiswa e-United States. Eminyakeni yakamuva inkampani iqale ukwanda okuqinile okuholele ekutheni ivule izitshalo emazweni afana neMexico, Israel noma iBrazil.
I-Innovexia Life Sciences Pvt. Ltd. yaziwa njenge- inkampani ehamba phambili emhlabeni jikelele ekwenziweni nasekukhangisweni kwemithi ehlukahlukene. Udumo lwale nkampani eyenza imithi lusezingeni eliphakeme kakhulu lethimba lalo lochwepheshe, izindawo zalo zobuchwepheshe kanye nokutshalwa kwemali kwalo kumaphrojekthi amasha ocwaningo.
Isekelwe eBombay, I-Alkem Laboratories ingenye yezinkampani ezihamba phambili zokwelapha eNdiya. Imikhiqizo yayo ithengiswa emazweni angaphezu kwama-40- Izidakamizwa ezijwayelekile ezisezingeni eliphakeme, izithako ezisebenzayo zemithi kanye ne-nutraceuticals. Sekukonke, kungaphezu kwama-800 brand ahlanganisa zonke izingxenye ezinkulu zokwelapha.
I-Alkem imaketha futhi ithengise imikhiqizo e-United States ngaphansi kophawu lwentengiso Khuphuka. Ngokufanayo, ithuthukisa umsebenzi wayo kwezinye izimakethe ezifana ne-Australia, iChile, iPhilippines neKazakhstan, phakathi kokunye.
Uhlu lwethu luphetha ngo IPCA Laboratories Ltd., Inkampani enolwazi olungaphezu kwamashumi ayisithupha eminyaka. Imikhiqizo yayo isatshalaliswa emazweni angaba yi-120, ngenkathi izakhiwo zayo zithole ukunconywa yiziphathimandla ezinkulu ezilawula izidakamizwa emhlabeni jikelele.
Enye yezinhloso eziyinhloko ze-IPCA ukugcina izinga eliphakeme lekhwalithi kuyo yonke imikhiqizo yayo, ukubheja ngokukhethekile kwezinye izindlela zokwelashwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yiziphi izinkampani ezinkulu zemithi eNdiya?
URaju Mahtani kusho
Ngingathanda ukwazi amagama amaLabhoratri aseNdiya, aqinisekiswe yi-DIGEMID yasePeru
Phendula uRaju Mahtani
U-ELIAS TAHAN kusho
Ngingathanda ukwazi uhlu lwemikhiqizo yelebhu ukwazi ukuthi yini abanayo futhi bakwazi ukusebenza nabo, sineNdlu Emele iVenezuela, iColombia neCentral America
Izinyoni zehlathi lase-Amazon
Izintaba ze-Andes eVenezuela